विश्वकपको अभ्यास खेलमा दक्षिण अफ्रिकाद्वारा श्रीलंका पराजित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वकपको अभ्यास खेलमा दक्षिण अफ्रिकाद्वारा श्रीलंका पराजित
एजेन्सी । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अघिको अभ्यास खेलमा दक्षिण अफ्रीकाले श्रीलंकालाई पराजित गरेको छ । कार्डिफमा शुक्रबार भएको खेलमा दक्षिण अफ्रीकाले श्रीलंकालाई ८७ रनले पराजित गरेको हो ।
दक्षिण अफ्रीकाले दिएको ३३९ रनको लक्ष्यसहित ब्याटिङमा उत्रेको श्रीलंका ४२ ओभर २ बलमा २५१ रन जोड्दा अलआउट भयो । श्रीलंकाका लागि कप्तान दिमुथ करुनारत्नेले ८७ तथा एञ्जेलो म्याथ्युजले ६४ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेपनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन् । यस्तै कुशल मेन्डीसले ३७ रन जोडे । श्रीलंकालाई सस्तैमा समेट्न दक्षिण अफ्रीकाका एन्डिले लक्कीले ४ विकेट लिए । यस्तै लुंगी नेगिले २ विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रीकाले ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ३३८ रन जोडेको थियो । दक्षिण अफ्रीकाका लागि कप्तान फाप डु प्लेसिसले ८८ तथा हसिम अमलाले ६५ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । यस्तै भान डेर डुसेनले ४० तथा एन्डिले लक्कीले ३५ रन बनाए । श्रीलंकाका सुरंगा लकमाल र नुवान प्रदीपले २–२ विकेट लिए ।
इंग्ल्याण्ड र वेल्समा हुने विश्वकपको तयारीका लागि दुवै राष्ट्रले अभ्यास खेलेका हुन् । विश्वकप यहिँ मे ३० बाट सुरु हुनेछ ।